Best Gzl260 akọrọ granulator emeputa na ụlọ ọrụ | Keyuan
A na -emechi akụkụ kọntaktị (ụlọ ọrụ) na ihe ahụ n'onwe ya, akara ya nọọrọ onwe ya.
A na -ejikarị akọrọ akọrọ na ọgwụ, nri, chemicaland ụlọ ọrụ ndị ọzọ.Ọ dabara adaba maka ị granụ ọgwụ nke mmiri na -emebi ngwa ngwa, ọ dị mfe ịmịkọrọ mmiri, na -enwe mmetụta maka ikpo ọkụ, na enwere ike iji ihe ahụ mee ihe iji meziwanye mmiri mmiri, mkpakọ mbadamba, Igwe na -ejuputa na ngwongwo maka ịkpa akpa. igwe a dabara adaba maka imepụta oke.
A na -eji akara abụọ ma ọ bụ karịa emechie akara ahụ, a na -ejikwa akara gas iji hụ na ịdị ọcha chọrọ yana akara a nwere ntụkwasị obi karịa. na -edu ụlọ.
A na -ahazi akụkụ kwụ ọtọ, vetikal na monolithic n'otu n'otu, enwere ike ịkwaga ya iche maka mwepu na nhicha dị mfe.
Njikwa PLC sistemụ ntanetị, ọrụ ihu igwe mmadụ LCD na-arụ ọrụ ihu igwe, ọnọdụ nri nri akpaka: vetikal.horizontal, mbadamba, na ọka niile ka edobere site na ngbanwe ugboro ugboro; nrụgide sistemụ, na njikwa na ntanetị na ntinye site na nri ruo nyocha usoro Ngosipụta na ajụjụ.
Igwe ahụ dum nwere akụkụ ndị a: etiti etinyere, sistemụ nri agụụ, sistemụ nri kwụ ọtọ, usoro nri kwụ ọtọ, usoro ịpị mbadamba, sistemụ na -akụpịa, usoro ọka niile, sistemụ nyocha, sistemụ hydraulic, ihe na -arụ ọrụ mechiri emechi, sistemụ gas (gụnyere vacuum degassing), sistemụ mmiri jụrụ oyi na sistemụ njikwa ọkụ eletrik.
Igwe ahụ bụ ihe nkwado kwụ ọtọ kwụ ọtọ, nri ụzọ abụọ, nke emere iji kewaa mpaghara nhazi site na mpaghara nnyefe ike, yana ezigbo akara akara yana ọdịdị dị ọcha, na-amata mmepụta emechiri emechi dị ọcha site na ntụ ntụ ruo urughuru. Akụkụ ndị a na-akpọtụrụ ihe (ụlọ na-arụ ọrụ) na ọdịdị na-abụkarị nke igwe anaghị agba nchara. Akụkụ dị n'ime ya dị larịị ma ọ dịghị mfe ịchekwa ihe, akụkụ mpụta dị larịị ma dịkwa mfe nhicha. Ụlọ na-arụ ọrụ bụ ikuku na-anaghị akwụ ọtọ yana nke nọọrọ onwe ya, yana akara ọtụtụ yana akwa mkpuchi gas iji hụ na ihe ndị dị ọcha chọrọ.
Nhazi nke igwe ahụ niile dị mma, kọmpat na etiti. Ọdịdị dị ọcha, mwepụ na nhicha dị mfe, ghọta mmepụta emechiri emechi dị ọcha site na ntụ ntụ ruo urughuru. Ntọala okpokoro dị mma, kọmpat, ọrụ etiti, nchekwa, ntụkwasị obi, ngwa ngwa igwe mmadụ, yana nnukwu ozi. Ngwa a na -arụ ọrụ nke ọma, na mkpọtụ 1.0 mita site na akụrụngwa dị n'okpuru 80 dB. Ngwa nwere njirimara ihe egwu yana ngwaọrụ nchedo nchekwa.
Ihuenyo na -arụ ọrụ nwere arụmọrụ akara nke ọma, nke nwere ike igbochi uzuzu na mgbasasị nke ọma. Emebere ya site na ngosi nrụrụ nrụrụ na nrụzigharị, yana ngbanwe igodo, nkwụsị mberede na ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịrụ ya site na ihuenyo mmetụ mgbe nkwụsị mberede na nkwụsị ọkụ dị mkpa.
Nke gara aga: GZL240 akọrọ granulator
Osote: ZL granulator
Akọrọ Granulating Machine
Akọrọ Granulation Machine
Akọrọ Roll Granulator
Akọrọ Ụdị Granulator
Pharmaceutical kpọrọ nkụ ntụ ntụ Granulator Machine